99.9% yevanachiremba vekuAmerica havaone Apple Watch semudziyo wekurapa | Ndinobva ku mac
99.9% yevanachiremba vekuAmerica havaone Apple Watch semudziyo wekurapa
Iyo Apple Watch chishandiso icho nekufamba kwemakore chiri kubatsira vanhu vane matambudziko emoyo uye nezvimwe zvakawanda. Muchokwadi, zvinogoneka kuverenga zviitiko izvo zvinorondedzerwa kuti nekuda kwemasensa uye kufanotaura kwewachi, zvimwe zvirwere zvemoyo zvakabatwa nenguva izvo zvingadai zvakagumisa hupenyu hweiye mushandisi wewachi. Nekudaro, zvese izvi hazviiti kuti vanachiremba veUS vavimbe nemudziyo uyu. Maererano nezvimwe zvidzidzo, 99.9% yavo yaisazoshandisa Apple Watch yekutevera kana kurapwa. Zvisinei, iri kushandiswa pakutsvakurudza uye nemigumisiro yakanaka kwazvo.
Kunyangwe isu tine nyaya dzinoverengeka dzevanhu vakaponesa hupenyu hwavo nekuda kwema sensors eApple Watch, chiremba wepfungwa Michael Breus anoti 99.9% yevashandi vezvokurapa havasati vanyanya kufarira kushandiswa kwayo mune zvekurapa. In chinyorwa chitsva kubva kuThe Financial Times, varapi vakasiyana-siyana uye vamwe mune zvokurapa vane udzame matambudziko ekubatanidza Apple Watch mukutarisira varwere kwemazuva ese. Vamwe vakati ramangwana apo Apple Watch inovandudza hutano hwevashandisi pamwero mukuru ichiri kure.
Zvino, mumunda wekutsvaga, zvinoita sekunge Apple Watch ine vateveri vayo. Maererano neCDC, zvirwere zvisingaperi ndicho chinhu chikuru chemadhora 3.8 trillion akashandiswa muUnited States pakurapa muUnited States. Kazhinji zvinogona kudzivirirwa kuburikidza nekuita maekisesaizi, kudya, nekukasika kuona. Iri mundima yekutsvagisa uye yekutarisa uko inogona kubatsira. Semuenzaniso:
Shruthi Mahalingaiah, muongorori weHarvard, anga achishandisa zvizvarwa zvakati wandei zveApple Watch kutevedzera ovulation cycle yevakadzi 70,000 muchidzidzo chikuru.
Dr. Richard Milani, mutevedzeri wemutungamiri wecardiology paOchsner Health, vanga vachishandisa Apple Watch, pakati pevamwe, kutarisa data kubva kuzviuru zvevarwere uye kushandisa njere dzekugadzira. kufanotaura zvinobuda uye kuona kuti ndevapi vanhu vangango rwara.
Isu tichafanirwa kuramba takamirira kuti vanachiremba vashandise Apple Watch mune yakananga ndima pane kutsvagisa. Izvi zvichabatsira kuita kuti yekutanga iitike.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » 99.9% yevanachiremba vekuAmerica havaone Apple Watch semudziyo wekurapa
Kuo anotarisisa nhau nezve AirPods Pro 2
Bluetooth tekinoroji inodzikamisa mhando yeAirPods